(Sawirro)Kooxda Comsed oo cashar lama ilaawaana u dhigtay Dawladda hoose. – Radio Daljir
(Sawirro)Kooxda Comsed oo cashar lama ilaawaana u dhigtay Dawladda hoose.
Janaayo 27, 2013 12:12 g 0
Gaalkacyo, Jan 27- Kooxda kubadda cagta ee Comsed ayaa galabta 1-0 oo rigooraa ku quusisay kooxda Dawladda hoose ciyaar ka mida tartanka tayaynta kooxaha heerka 1aad ee gobolka Mudug, iyadoo ciyaartaasi buuq uu ka dhashay ka dib markii mid ka mida ciyaaroyda kooxda Dawladda hoose oo gacan qaaday dagaalna uu ku sameeyay garsoorihii ciyaarta dhex dhaxaadinayay.
Goolka kooxda Comsed ay ku badisay oo yimid qaybtii 2aad ee ciyaarta ayaa ahaa rigoore ama lug ku laad uu gool u badalay xidigga afka hore ee Ciise oo ciyaartii maanatana si weyn oga dhex muuqday.
Kooxda Dawladda hoose ee galabta laga badiyay ayaa ka mid ahaa kooxihii ugu cad cadaa ee looga baqay koobkan ugu yaraan inay sami-final soo gaaraan inkastoo haatan rajadoodu ay xuntahay lagana yaabo inay ganaaxyo la kulmaan ciyaartoyda qaar.
Ciyaarta ayaan ku dhamaan sidii loogu tala galay ka dib markii garoonka uu isku badalay buuq ciyaartii oo garsooruhu uu joojiyay.
Gudoomiyaha ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Mudug C/hodan Dayax -leef ayaa ciyaarta ka dib Allgaalkacyo u sheegay inay hada ka dib xakamayn doonaan ayna ka hor tagi doonaan in dagaal ama gacan qaad lagu sameeyo garsoorka ciyaarta taasina ay maanta ugu danbaysay.
Kooxaha gobolka Mudug ayaa hada intooda badan waxay wax badan ka badaleen hab dhaqankoodii ciyaaraha iyadoo hada ay is badaleen kooxo fara badan oo horay rabsho caan ugu ahaa.
Ugub kuma aha Cawaale mana aha markii ugu horaysay oo garsoore lagu dhex feero garoonka gudihiisa hase ahaatee inta badan waxaa loo aaneeyaa ciyaartoyda oo garoonka heerka sera A soo gala iyagoo aan gaarin xiligii uu gali lahaa Sera A.
Dadweynaha Taageerayaasha ah ayaa qaati bilaahi ka taagan ciyaartoyda inta badan weerara garsooraha, kuwaas ayay dadka qaar ku sheegaan inaysan ku kalsoonayan lugtooda iyo xirfadooda kubada cagta.
Maalinta barri ah waxaa isku ballansan kooxaha Yamays iyo Homboboro, waxaana khatar ku jirta kooxaha Homboboro oo ka mida kooxaha ugu tunka weyn gobolka haddii barbar dhac ay gashana ka harta tartanka.
Isku soo wada duuboo tartanka ayaa galab walba galabta ka danbaysa waxaa garoonka soo buux dhaafaya boqolaal qof oo ciyaaraha danaysa.
Gudoomiyaha Sportska Mudug c/hodan